Black Z-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk With black ArmorChina Cha Cha desk, gaminggba Cha Cha oche, nọdụ oche, tebụl PC manufacturersgba Cha Cha emepụta na ụlọ mmepụta ihe-Ahịa List-China Foshan Qiangshou Hardware Manufacturing Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Z-Shaped Gamig Desk > Z-Shaped 55 nke anụ ọhịa Desk > Black Z-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk Na nwa Armor
Black Z-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk Na nwa Armor
A egwuregwu egwuregwu ọ bụla ọkpụkpọ ga-enwerịrị, Touch Control iji melite symphony ikanam ọkụ. Tebụl egwuregwu na-enyere gị aka inwe ahụmịhe egwuregwu ka mma. Anyị nwere ike inye ndị ahịa ngwaahịa OEM na ODM. Nwere ike ịkpọtụrụ anyị iji nweta ihe nlele maka ego. Anyị na-atụ anya ibu gị ogologo parther.
Nnukwu Egwuregwu Egwuregwu: Egwuregwu kọmputa na-egwu egwu nwere egwuregwu egwuregwu na-emesapụ aka nke zuru oke maka ndị na-egwu egwuregwu. Tebụl carbonfiber bụ unyi na ọkọ na-eguzogide ọgwụ, ma dịkwa mfe ihicha ọcha. Okpokoro okpokoro a na-eme ka ị nwee ike ịnọdụ ala ma kwado nkwonkwo aka gị na aka gị. Egwuregwu egwu egwuregwu 55â € obosara site na 23.62 dị omimi, njikwa na-akwụ gị ugbu a ka ị nwee ọgụ zuru oke iji bibie asọmpi gị.
Ã ã € Kwụsị na nkwụsi ike Z Shape DESIGNã € ‘
Anyị maara mkpa egwuregwu gị dịruru gị, nke a bụ ihe kpatara anyị jiri wepụta tebụl egwuregwu a nwere ụdị ọdịdị Z-nke siri ike. Ọ dị jụụ ma sie ike. Abịa na anọ leveling ụkwụ iji jide n'aka na gị PC egwu egwuregwu oche bụ larịị na anụ. Enweghị ọgba aghara.
Tags na-ekpo ọkụ: Deskgba Cha Cha, Black Z-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk With ojii Armor
Red Z-Shaped 55 inch Remote Control RGB LED Light Gaming Desk Na nwa Armor
Red Z-Shaped 55 anụ ọhịa Remote Control RGB LED Light Gaming Desk With red Armor
Black Z-ekara 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Oche na-acha uhie uhie Armor
Black Z-Shaped 55 inch Remote Control RGB LED Light Gaming Desk With black Armor
Black Z-Shaped 55 anụ ọhịa Remote Control RGB LED Light Gaming Desk With red Armor
Red Z-Shaped 55 inch Gaming Desk enweghị Light